Hadaadan maqal Life labaad, waa fududaha dunida internetka ee 3D, halkaas oo aad doorato avatar, abuuro fursado kulan oo online ah oo la falgalaya kuwa grønnkål. Ka feker The Sims si buuxda online iyo steroids. Khadka boggooda boggooda hore wuxuu akhriyaa, "Dunnaanta weligeed ah ee 3D oo ay abuurtay dadka isticmaala."
Nolol labaad ayaa ka badan kuwa 20 ee isticmaala macaamiisha diiwaangashan iyo dadka isticmaala waxay ka yimaadeen dhammaan geesaha dunida. Tani waxay ku siinaysaa dhagaystayaal balaaran. Engadget warbixintan ayaa side ugu sarreysa 36 millioner ee 2013, side daraadeed 20 millioner waa lambar qadarin ah sid diiwaanka ay u awoodi karaan oo ay isbedbeddeli karaan waqti ka dib.
Sida iska cad, qofna ma dhahayo waxaad ku gaari doontaa dhamaan isticmaaleyaasha diiwaangashan si fudud adigoo marti galinaya munaasabad. Xitaa ka baxsan 1 million isticmaalayaal firfircoon bil (wali waa tiro aad u badan oo pappa ah), dhammaantood ma wada gaari doontid iyaga. Si kastaba ha noqotee, wali waad lahaan doontaa dhagaystayaashaas balaaran iyo kuwa xiiseynaya ayaa ka qeybgali doona.
Haa, waa inaad xoogaa maal gashid dadaallada, laakiin haddii aad ku jirtid miisaaniyad iyo / ama aad raadineyso qaabab cusub oo hal abuur leh oo aad ku dhiirrigeliso, tani waa mid u qalma aragti labaad iyo xitaa saddex. Xitaa dhowr iyo toban tilmaam oo cusub ayaa kuu qalmi kara waqtigaaga iyo dadaalkaba.
1.2 Dooro Xisaab
2 Sidee ayaad Naftaada u Horumarin karta Nolol Labaad
2.1 Xaalad Daraasad: Karen Kay
2.2 Daraasadda Xaaladda: Horumarinta Caafimaadka
Xisaabaadka waa u bilaash in la dejiyo. Si fudud u guji oranjiga "Ciyaar bilaash ah" badhanka sida lagu muujiyey sawirka kore. Kadib, xulo avatar-kaaga. Hadda, side xirfadle ganacsade ah iskuday inaad maskaxda ku hayso in ay u badan tahay in la raaco muuqaal guud, ganacsi u eg. Tusaale ahaan, Nolosha Labaad waxay leedahay vatare vatare ah oo la heli karo. Ilaa aad ka maamusho goobta waxsoosaarka Halloween, taasi ma aha doorashada ugu fiican ee ujeeddooyin xayeysiin ah.
Tallaabada xigta ka dib markaad gujiso "Dooro Avatar" tani waxay noqon doontaa i lagu magacaabo magacaaga. Maskaxda ku hay inaad rabto magaca magacaaga avatar inuu sameeyo waxyaabo badan:
Xaqiiqdii waad isticmaali kartaa magacaaga dhabta ah, laakiin maskaxda ku hay inaad waxyaabo ku dhex bixin doontid baraha bulshada, marka waxaad ubaahan doontaa inaad sii wado xirfad-yaqaanimo markasta. Bedel ahaan, waxaad abuuri kartaa dabeecad si aad ugu mataasho astaantaada. Ka fikir dabeecaddan mascutigaaga. Tusaale ahaan, 17 år siden Mark Mark aan bilaabay degel degel yar oo loo yaqaan Word Museum, waxaan abuuray dabeecad hage dalxiis.
Dabeecadaydu waxay ahayd Amelia, kaalinteedana waxay ahayd inuu hoggaamiyo dadka martida ah iyada oo loo marayo meelaha kala duwan ee goobta. Waan ogahay i laga yaabo inay u muuqato voks yar oo qaan-gaadhka ah maanta, laakiin dib u noqoshada waxay ahayd heer ka sarreeya tan hadda.
Magacyada waxay heli karaan xarfo iyo lambarro kaliya. Looma oggola boos ama xarfo gaar ah. Sidaa darteed, haddii aan rabo inaan magaceyga isticmaalo, waxaan abuuri lahaa dabeecad la yiraahdo LoriSoard (aan lahayn bannaan).
Kadib waxaad buuxin doontaa xoogaa macluumaad dheeri ah, side:
Koontada aasaasiga ahi waa lacag la’aan waana meel wanaagsan oo lagu bilaabi karo. Haddii aad rabto inaad dejiso goob kulan oo Nolol Labaad ah, i kasta oo ay tahay, waxaad u baahan tahay xisaab xisaabeed Bixin ah, kaas oo kaaga kici doona qiyaastii $ 6 / bishii.
Waxaa lagugu dardargelin doonaa inaad soo dejiso oo aad rakibto Nolosha Labaad. Ha walwelin. Ma qaadato meel badan.
Si aad u bilowdo inaad ku sii socoto agagaarka Labaad, waxaad u baahan doontaa inaad booqato Barashada Isbanishka, kaas oo kuu macnayn doona wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan barashada Nolosha Secondita gurigaaga iyo dhacdooyinkaaga.
Sidee ayaad Naftaada u Horumarin karta Nolol Labaad
Waxaa jira siyaabo fara badan oo aad u isticmaali karto Life Second si aad naftaada u kobciso, laakiin sida bogagga bulshada badankood, uma baahnid inaad noqoto mid been abuur ah. Taabadalkeed, ka fikir waxaad ku deeqi karto dadka kale oo qiimo leh.
Xaalad Daraasad: Karen Kay
Cusbitaalka Karen Kay wuxuu isticmaalay Second Life sidii qalab dhiirrigelin ah dhawr sano ka dib. Waxay soo bandhigtay sheeko ku saabsan mareegta, waxayna martigelisay akhristayaasheeda inay ka qaybgalaan. Marka laga hadlayo "sheeko", Karen ayaa ka wada hadashay qorista iyo ganacsiga qoraaga.
"Waxay ahayd mid aad u xiiso badan, wax yar aayay ii aheyd markii ugu horeysay," ayuu yiri Karen.
Waxay kan dages i ay caqabad og ingen dag i la ogaado sawirada iyo side ay rabto inay u labisto una bedesho muuqaalkeeda.
Waxaad ka arki kartaa shaashadda hoose ee Karen ee slange in ay qol qol asal ahaan u egtahay inay leedahay masraxa kadibna kuraas ay dhagaystayaashu ku fadhiyaan haddii kale soo jiid.
Skjermbilder-ka / khudbadda Karen Kay ee ku saabsan Nolosha Labaad
Daraasadda Xaaladda: Horumarinta Caafimaadka
Marka ay timaado i kor u qaadida caafimaadka internetka, dareenkaaga ugu horeeya wuxuu noqon karaa inaan eegno warbaahinta bulshada / muuqaalka adduunka sida virtual Life, laakiin taasi waa dhab ahaan waxa cilmi baarayaashuguadah kaaaaaaaaaa yaabo inay noqoto.
Hadafku wuxuu ahaa in dadka lagu dhiirrigeliyo inay sameeyaan doorashooyin nololeed oo caafimaad qaba. Cilmi-baadhayaashu måte ka-qayb-galayaashii ka-qayb-galayeen si ay u ogaadaan inta saameysa farriintooda marka la soo gudbiyo barxad caalami ah.
Tijaabada waxaa lagu qabtey meel caadi ah oo loogu talagalay jaamacad lagu magacaabo amfiteater. Dumarka 25 iyo raga 15 ayaa ka qayb qaatay.
Natiijooyinka? Ka-qaybgalayaashu waxay dareemeen inay ku mashquulsan yihiin oo ay si fudud u soo dhaweeyeen xogta si ka duwan sidii ay u yeelan lahaayeen. Waxa aad ka baran karto tijaabadan waxa weeye in dadku u baahan yihiin macluumaad.
Sawirrada shaashadda waxbarashada caafimaadka ee ku saabsan Nolol Labaad (så snart det er mulig å kjøpe koowaad ee Isniinta)
Haddii aad jeceshahay inaad tijaabiso adigu nolosha Labaad oo aad la xiriirto kuwa kale warbaahinta bulshada og 3-D shabakadaha adduunka, waxaa jira fikrado aad ku fulin kartid maanta oo kaa caawin doona inaad sameyso khibrada uhiba.
Ku marti qaado macaamiishaada hadda iyo macaamiisha warsidaha si aad u ogaato booskaaga Second Life.
Waqti u qaado si aad u sameysatid falanqayn ku saabsan ganacsigaaga. Karen Kay, qol qurux badan side aad ka arki kartid bandhigga hadalka. Wixii falanqayn caafimaad, qaab amfi ah oo dibadeed loogu talagalay waayo-aragnimo la mid ah riwaayadaha. Haddii aad ka shaqeysid qof-ka-mid ah tababaraha nolosha, qolka raaxada leh ee kuraasta qaar ayaa laga yaabaa inay ka fiicnaadaan. Waa inaad go’aamisaa nooca qaabka aad rabto inaad abuurto oo ka tagto halkaas.
Ujeedada ugu weyn waa in la bixiyo waxyaabo cusub oo xiiso leh kuwaas oo kaa caawin doona inaad la macaamilato dadka deggan Second Life. Waxaa jira siyaabo fara badan oo lagu dhiirrigeliyo dhaqdhaqaaqyada, side iyada oo loo marayo ogeysiisyada dhacdooyinka, ama adoo qaadaya xayeysiisyo ku saabsan wargeysyada la xiriira Nolol Labaad.
Sii shaandho bilaash ah oo noocyo kala duwan ah si aad u bixiso. Furaha ayaa ah in la hubiyo in ay tahay mid la xidhiidha ganacsiga aduunka ee dhabta ah oo dadka deegaanka ka dhigi doona kuwo ka badan.
Samee dukaan weyn oo xafiis xafiis ah. Waad kiraysan kartaa booskan, laakiin way ka caqli badan tahay inaad lahaato goobta. Ha walwelin. Voks badan kama kici doonto i la diyaariyo, i kastoo kharashyadu ay kala duwanaan karaan. Markaad voks iibiso, ku dar sumad dhul leh. Tani waxay ka caawineysaa macaamiisha inay mar kale kuu helaan oo waxaad ku horumarin doontaa daacadnimo soo socota.
Second Life wuxuu bixiyaa waxyaabo badan oo dheeraad ah fikradaha xayeysiinta lacag la’aanta ah iyo kuwa jaban ee adduunka ku dhisan. Wixii ka hooseeya $ 100 sannadkii, waxaad ka heli mapa badanaa xayeysiin baddan oo ku yaal boggan. Ma aha in la sheego, inta badan tartankaagu waxay u badan tahay inuusan isticmaalin boggan si kor loogu qaado macaamiisha mustaqbalka.
Ka taxaddar, i kastoo. Måten fududahay inaad luntid adduunkani dalwadalka ah oo aad iska ilooto shaqada adduunka dhabta ah ee aad u baahan tahay inaad ku dhammaystirto si aad guul u noqoto.
Hadaadan maqal Life labaad, waa fududaha dunida internetka ee 3D, halkaas oo aad doorato
Hadaadan maqal Life labaad、waa fududaha dunida internetka ee 3D、halkaas oo aad doorato avatar、aburo fursado